नायिका दीपिकालार्इ कस्ताे केटा मनपर्छ ?
सिम्पल केटा मनपर्छ सबैभन्दा पहिलो कुरा, कुनै पनि पुरुषको लुक्सभन्दा व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ । लुक्सले फरक नै नपार्ने भन्नेचाहिँ होइन । तर, व्यवहार बढी महत्वपूर्ण हो । मलाई सिम्पल केटा मनपर्छ । हेर्दा बिजनेसम्यानजस्तो देखिने भलाद्मी पुरुष आकर्षक लाग्छ । दुःख बुझ्ने हुनुपर्छ कुनै पनि सफल व्यक्तिले जीवनमा धेरै संघर्ष गरेको हुन्छ । सफलता प्राप्त […]
काठमाडौं – यतिबेला सामाजिक संजालमा अभिनेता अनमोल केसी चारै तिर छाएका छन् । एक चलचित्रका लागि ५० लाख पारिश्रमिक लिएको चर्चाले अहिले सामाजिक संजाल रंगिएका छन् । हिरोले ५० हजार लिए हिरोइनलाई कति दिने, निर्देशक र प्राबिधिकको कति तोक्ने लगायत अहिले सामाजिक संजालमा चर्चा र ब्याङ्ग्यको बिषय बनेका छन् । केही अनलाइन मार्फत अनमोललाई चलचित्र […]
साम्राज्ञी गर्दै छिन् बिवाह ? यसो भन्छिन् साम्राज्ञीकी आमा
लगातार दुई हिट चलचित्र ‘ड्रिम्स’ र ‘ए मेरो हजुर २’ दिएकी नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह नेपालको मंहगी नायिका बनेक छिन् । अभिनेता आर्यन सिग्देलको निर्माण र अभिनय रहेको चलचित्र ‘कायरा’मा साम्राज्ञीले १० लाख पारिश्रमिक लिएको खबर बाहिरिएको हो । बुझिएअुनसार साम्राज्ञीले सुरुमा कायराको लागी ८ लाख मागेकी थिइन् । तर पछि चलचित्रमा आवश्यक पर्ने […]
अभिनेत्री बर्षा राउतलाई १० केजी घट्नु पर्ने पीडा
धेरै खानेकुरा खानुपर्ने मान्छेलाई तौल घटाउनु पर्दा कम्ता पीडा हुँदैन । अभिनेत्री बर्षा राउतको हकमा पनि अहिले यही नै भएको छ । उनलाई अब, १० केजी घट्नुपर्नेछ । फिल्म क्षेत्रमा आएदेखि नै बर्षाको सुन्दरताको चर्चा त हुन्छ नै । साथमा, उनको मोटोपनाको पनि चर्चा हुन्छ । बर्षा घट्नुको साटो झन झन बढेकी छिन् । यसैले […]
छुरा हानि छाती तोर्दै छु …
छुरा हानि छाती तोर्दै छु जति पिडा देउ मलाई तिम्रो खुसीको लागि संसार छोर्दै छु एकदम मायामा बाधिए पछी त् एस्तो पो हुदो रहिछ